Mudita Shwe Kyaung: 2011
Myit Thar Sayadaw Dhamma Talk - 3rd Dec 2011
Posted by MoeMaKa at 3:14 PM No comments:
Labels: Dhamma Talks, Event, Invitation
People with close distance but distant heart
အရှင်ဉာဏိက။ နိုဝင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၁
နေရာသစ်လေးတစ်နေရာ အတန်အသင့် အခြေခိုင်ဖို့ ကြိုးစားတည်ဆောက်နေတဲ့ကိုယ့်ကို အနီးအဝေးက အား ပေးကူညီကြတယ်။ ဒါဟာဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအနေနဲ့ပဲကြည့်ကြည့်၊ ဒီထက်ခန့်ညားတဲ့စကားကို ယူသုံးရမယ်ဆိုရင် ဖြင့် သာသနာရေးရှုထောင့်ကပဲကြည့်ကြည့် ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်စရာချည်းပါပဲ။ ပုဂ္ဂိုလ်ချင်း ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် လို့ လေးစားခင်မင်မှုနဲ့ ထောက်ပံ့တယ်ဆိုလျင်တောင် သာသနာကိုအမှီပြုပြီး နေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ နေ့စဉ် ဘဝလှုပ်ရှားမှုများဟာ သာသနာအတွက်သာ ဦးတည်ထားတယ်ဆိုတာ ကာယကံရှင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကတော့ အသိဆုံးပါပဲ။ သာသနာဆိုတဲ့ အဆုံးအမ ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ လိုက်နာကျင့်ကြံသူ မရှိတဲ့ သာသနာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ဖက်ဖက်က ချို့ယွင်းနေတယ်ဆိုလျင်ဖြင့် လှပတင့်တယ်နိုင်တော့မယ် မဟုတ်ပါဘူး။ ပြည့်စုံလှပတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုလျင်ဖြင့် မှီရာသာသနာကိုလည်း လိုက်နာဖြည့်ကျင့်ပါမှ၊ သာသနာတည်စေရာ ပုဂ္ဂိုလည်ကိုလည်း ဝိုင်းဝန်းကာဖြည့်တင်းကြကာမှ ဖြစ်မှာပါ။ ဒါကြောင့် ကူညီအားပေးသူတွေဆိုတာ သာသနာ အတွက် အခရကျတဲ့သူတွေချည်းပါပဲ။
Posted by MoeMaKa at 11:15 AM No comments:
မုဒိတာရွှေကျောင်းရဲ့ ပထမအကြိမ် စုပေါင်းဘုံကထိန်သင်္ကန်းဆက်ကပ်ပွဲကို ၂ဝ၁၁ ခု အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပပါမယ်။ ကထိန်ပွဲကျင်းပတဲ့ ကုသိုလ်မင်္ဂလာ အခါတော်နေ့မှာ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဗေးဧရိယာရှိ ကျောင်းအသီးသီးက သံဃာတော်များကို ပင့်ဖိတ်ကာ သင်္ကန်း၊ ဆွမ်း၊ နဝကမ္မစတဲ့ လှူဖွယ်များလှူဒါန်းပြီး ပရိတ်သတ်များကိုလည်း စေတနာရှင် များက စားသောက်ဖွယ်များနဲ့ ဧည့်ခံကျွေးမွေးပါမယ်။
ကထိန်သင်္ကန်းတစ်စုံလျင် ဒေါ်လာ ၅ဝ နှုန်းဖြင့် ကြိုတင်ပြီး လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကထိန်ပွဲသို့ ကြွရောက်ကြပါရန်ကို လည်း ကြည်လင်စိတ်ထားဖြင့် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားပါတယ်။
We would like to cordially invite you to share our very first Kathina Robe Offering Ceremony with us. As you know, this isamomentous event and it would mean so much to us if you could be there.
The event will take place at Mudita Shwe Kyaung, located at 27695 Leidig Ct Hayward, CA 94544, on 16th October, 2011. We look forward to seeing you then.
09:30am – 10:00
Lunch offering to monks and Provide lunch to Devotees
ဒေါ်ခင်နွယ်စိုး၊ ဒေါ်မေဘယ်အောင်၊ ဒေါ်နွယ်နီသောင်း၊ ဦးခင်မောင်ချို ဒေါ်စောမြတ်မာ၊ ဦးအောင်သူ ဒေါ်ဝါဝါ၊ ဦးညီညီလွင် ဒေါ်ခင်ချိုထွေး၊ ကိုသားသား မသက်သက်၊ ကိုရဲထွဋ် မအေးမြတ်သူ မိသားစုများနှင့် မိတ်ဆွေများ-မုန့်ဟင်းခါး လဘက်ရည်။ မိခင်ကြီး ဒေါ်ဟယ်လင်လင်းအမှူးထား၍ မာဂရက်လင်း ဒေစီလင်း(လင်း) မိသားစု- ဖာလူဒါ။ ဦးရစ်ချတ် ဒေါ်ဘေဘီ မိသားစု- ခေါက်ဆွဲသုတ်။ ကိုမောင်မောင် မဝါ- မန္တလေးပဲကြော်။ မေမိသားစု- ဘိန်းမုန့်။ ကိုညွန့်သန်း မထွေးထွေးဝင်းမိသားစု-အချိုရည်၊ သောက်ရေသန့်။
သံဃာတော်များအား စုပေါင်းဆွမ်းဆက်ကပ်မည်ဖြစ်၍ နှစ်သက်ဖွယ်ရာများ ချက်ပြုတ်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
Contact: 510 785 0787/ 510 574 5442 Email: ashinlay@gmail.com Web: www.mymudita.com
Posted by MoeMaKa at 4:08 PM No comments:
Posted by MoeMaKa at 10:39 PM No comments:
စက်တင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၁
ရွာဦးကျောင်းက ခေါင်းလောင်းသံ ကဗျာလေးနဲ့ပတ်သက်ကြီး ခေါင်းလောင်းသံ ငါတို့ကြားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ စာတစ်ပုဒ်၊ အမျှ ဘာကြောင့် ယူရတယ်ဆိုပြီး စာတစ်ပုဒ်၊ စာနှစ်ပုဒ်ရေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ပထမဆောင်းပါးကို ဖတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ ဆောင်းပါးထဲမှာ ငယ်စဉ်က ကစ္စည်းသဒ္ဒါကြီးစာအုပ်ထဲမှာ သင်ယူခဲ့ဘူးတဲ့ “ဇီရန္တိ ဝေ ရာဇရထာ သုစိတ္တာ၊ အထော သရီရမ္ပိ ဇရံ ဥပေတိ။ သတဉ္စ ဓမ္မောန ဇရံ ဥပေတိ၊ သန္တော ဟဝေ သဗ္ဘိ ပဝေဒယန္တိ” ဆိုတဲ့ဂါထာလေးအကြောင်းကို ထည့်ပြောလျင် ပိုပြည့်စုံမယ်။ တပည့်တော်တော့ မြန်မာပြည်ရောက်ရင် တရားဟောဖို့ တရားတစ်ပုဒ်ရပြီဆိုပြီး လောလောဆယ် နယူယောက်မှာရောက်နေတဲ့ ဓမ္မဘေရီဆရာတော်က အကြံပြုစကားနဲ့ မုဒိတာ စကား မိန့်ကြားပါတယ်။
Posted by MoeMaKa at 10:34 PM No comments:
Posted by MoeMaKa at 4:13 PM No comments:
သြဂုတ်လရဲ့ နွေနှောင်းရက်ကျန်က ကုန်လုကုန်ခင်။ မနက်ဖန်ဆိုလျင်ဖြင့် စက်တင်ဘာလရဲ့ ပထမနေ့။ နွေနေ ရှိန်ရဲ့ အပူငွေ့တို့လည်း ဒီနေရာလေးကနေ ပြန်လည်ထွက်ခွါသွားဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပြီပေါ့။ ညပိုင်းများမှာဆို ဆောင်းကိုလှုပ်နှိုးမယ့် လေနုနု အအေးစက ခပ်ဟဟလေး လှစ်ထားတဲ့ ပြူတင်းကြားကနေ ဖွဖွလေး တိုးလို့ပင် ဝင်လာတတ်ပြီ။ ပြင်ပက အအေးဒဏ်ကို ခိုလှုံဖို့ တိုးလျိုးကာ ဝင်လာလေသလား၊ အဆောင်တွင်းနေသူကို အေး ချမ်းမှုပေးနိုင်စေဖို့ တိုးလျိုးဝင်လာလေသလား၊ ဒါကိုဖြင့် ခွဲခြားလို့တော့ မသိနိုင်ပါလေပြီ။
Posted by MoeMaKa at 4:12 PM No comments:
Waso Pwe - 14th August 2011 - Photo Album
Posted by MoeMaKa at 4:00 PM No comments:
The open door at the Mudita Shwe Kyaung
လာရဦးမယ်လို့ ပြောနေဖို့ဖြင့် မလိုပါ
မနေ့က အင်ဒီယာနာပြည်နယ်မှာ ရောက်ရှိနေကြတဲ့ နောင်တော်ဆရာတော် သုံးပါးနဲ့ စကားပြောဖြစ် တယ်။ အဲဒီမှာ ဆရာတော် ဦးဇာဂရ (ကံထွန်းသစ်) က အရှင်လေးလည်း ကျောင်းထောင်ကျနေပြီမို့ စာ မရေးနိုင်ဖြစ်နေထင်တယ်။ စာတွေ မဖတ်ရတာ ကြာပြီရယ်လို့ စာရေးဖို့ တိုက်တွန်းသံပါတဲ့ စကားကို မိန့်ပါတယ်။
"မှန်ပါ၊ ဟုတ်ပါတယ်ဘုရား" လို့ ပြန်လည်လျှောက်ထားဖြစ်တယ်။ သူမိန့်ကာမှ ဟုတ်တာပေါ့။ မရေးဖြစ် တာ တော်တော်ကြာနေခဲ့ပြီပဲလို့ ရုတ်တရက် စဉ်းစားမိတယ်။ နောက်ပြီး ညနေပိုင်းကပဲ ရင်းနှီးတဲ့ ဒကာတစ်ဦးနဲ့ တွေ့ခဲ့လို့ သူလျှောက်ထားတာပတ်သက်ပြီး စာရေးဦးမယ်လို့ ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ဆရာကံကို ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့တယ်။
ညတွင်းချင်းပဲ ရေးဖို့စိတ်ကူးခဲ့ပေမယ့် တစ်နေ့လုံးလာသမျှ ပရိတ်သတ်နဲ့ စကားပြောနေရတဲ့ အရှိန်က ပြလာပြီမို့ ခဏအိပ်ရာပေါ်လှဲလိုက်တာ အိပ်ပျော်သွားခဲ့လို့ တစ်ကြောင်းမှ မရေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ စိတ်နောက် ကို မလိုက်နိုင်တဲ့ရုပ်က ရွှေရတုသက်တော် နီးလာခြင်းရဲ့ အမှတ်လက္ခဏာသင်္ကေတကို ပြလို့နေပြီ လေ။
မုဒိတာရွှေကျောင်းကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာ ခုဆို တစ်လကျော်ကျော် ရှိနေခဲ့ပြီ။ ကျောင်းဖွင့်ပွဲ မတိုင်မီမှာ ပြင် ဆင်ချိန်က တစ်လနီးပါးလောက်နဲ့ဆိုတော့ မုဒိတာရွှေကျောင်းနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ရက်တွေက နှစ်လခန့် ရှိခဲ့ပြီပေါ့။ ဒီနှစ်လလောက်အတွင်းမှာ တွေ့ကြုံဆုံခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံက အဖုံဖုံ။ မြင်ရ ကြားရ ရောင်စုံ အစအနတွေရယ်က အပြည့်။ ကြမ်းထမ်းတာတွေလည်း ရှိ။ လွမ်းတမ်းစရာတွေလည်း ရှိ။ ဘဝရှိခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လိုမှ ရှောင်ပယ်လို့ မရနိုင်တဲ့ လောကသဘာဝ။ အကောင်းအဆိုး တရားတွေနဲ့ မြိုင်လို့ ဆိုင်လို့။ တစ်ပွင့်စီ၊ တကန့်စီကို စနစ်တကျ ရွေးချယ်ကာ စာစီကုံးရလျင်ဖြင့် အရောင်အသွေး တော်တော်စုံမယ့် စာပန်းကုံးကောင်းကောင်း ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပင် တွေးမိပါသေးရဲ့။
Posted by MoeMaKa at 3:32 PM No comments:
First Waso Event of the Monastery
ဖိတ်စာရရှိပေမယ့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လာသူဖက်က ကြွရောက်ဖို့ ပျက်ကွက်နိုင်သလို အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့်ပဲ ဖိတ်သူဖက်က ဖိတ်စာပေးပို့ဖို့လည်း ပျက်ကွက်နိုင်တာပါပဲ။
မုဒိတာရွှေကျောင်းက လူကြီးလူငယ် ဖြူဖြူမဲမဲ ကျားကျားမမ မခွဲခြားပဲ အားလုံးကို ဖိတ်တာပါ။ ဖိတ်စာရသည် ဖြစ်စေ၊ မရ သည်ဖြစ်စေ၊ ဘယ်နည်းနဲ့ပဲ ကြားရကြားရ။ အချိန်ရလို့ အဆင်ပြေလျင်ဖြင့် ကြွရောက်ပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားပါတယ်။
နီးစပ်ရာ မိတ်ဆွေများကိုလည်း ဒီဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ သတင်းစကားကို ထပ်ဆင့်ကာ ပါးပေးဖို့ ပြောပါတယ်။
ပထမအကြိမ် စုပေါင်း ဝါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်ပွဲ
နေ့ရက်-သြဂုတ်လ ၁၄ ရက် (8. 14. 2011) Sunday
နေရာ- Mudita Shwe Kyaung, 27695 Leidig Ct, Hayward, CA 94544
အချိန်- နံနက် ၉ နာရီ ၃ဝ မှ နေ့လယ် ၁ နာရီ
ဝါဆိုသင်္ကန်း ကြိုတင်လှူဒါန်းလိုပါက ချက်မှာ Mudita Shwe Kyaung လို့ ရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
ကြွရောက်လာမည့် ပရိတ်သတ်များကို မိခင်ကြီး ဒေါ်ဟယ်လင်လင်းအမှူးထားတဲ့ မာဂရက်နဲ့ ဒေစီလင်း(လင်း) မိသားစုက ဖာလူဒါနဲ့ မြန်မာမုန့်။ ရော်နယ်လ်နဲ့ ဘာဘရာရှူးမိသားစုရဲ့ မုန့်ဦးနှောက်။ အစန်း နယ်လီမိသားစုရဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ နနွင်းမကင်း၊ပူတင်း၊ ရွှေချည်။ ဦးကျော်လင်း ဒေါ်အေးရွှေမိသားစုရဲ့ ကျောက်ကျောဖျော်ရည်နဲ့ မောင်အောင်ထွန်းလင်းဦးဆောင်ကာ လူငယ်ဝေယျာဝစ္စအဖွဲ့က တာဝန်ယူချက်ကြမယ့် မုဒိတာရွှေကျောင်းနဲ့ စုပေါင်းအလှူရှင်များရဲ့ မုန့်ဟင်းခါး စသည်တို့နဲ့ ဧည့်ခံမှာပါ။
ကိုယ်တိုင်ကုသိုလ်ယူကာ ပါဝင်လှူဒါန်းလိုပါရင်လည်း မုဒိတာရွှေကျောင်းကို ဖုန်းဆက်နိုင်ပါတယ်။
Phone: 510 785 0787/ 574 5442
Posted by MoeMaKa at 11:40 PM No comments:
Posted by MoeMaKa at 10:43 PM 1 comment:
မုဒိတာရွှေကျောင်းမှာ ဓမ္မဘေရီ တောင်စွန်းဆရာတော်က အဘိဓမ္မာသင်တန်းပို့ချ
ဇူလိုင် ၂၃၊ ၂၀၁၁
သည်နေရာတွေမှာ ရယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာကွန်မြူနီတီမှာ မုဒိတာပွားကြဖို့ လိုအပ်တဲ့အကြောင်း မုဒိတာရွှေကျောင်းဖွင့်ပွဲမှာ ပြောထားတာကို စိတ်ဝင်စားရင် နားထောင်ဖို့ပါ။
အကြို မိတ်ဆက် (ဇူလိုင် ၁၇၊ ၂၀၁၁) ။ ပထမနေ့။ ဒုတိယနေ့ ။ တတိယနေ့ ။ စတုတ္ထနေ့ ။ (အသံဖိုင်များ)
Posted by MoeMaKa at 4:20 PM No comments:
Labels: Dhamma Talks
ကျောင်းဖွင့်ပွဲတွင် ဗန်းမော်ဆရာတော် ဦးကုမာရာဘိဝံသ ဟောကြားတော်မူသော သြ၀ါဒ မိန့်ခွန်း -
ကျောင်းဖွင့်ပွဲတွင် မစိုးရိမ်ဆရာတော် ဦးရာဇဓမ္မာဘိဝံသ ဟောကြားတော်မူသော သြ၀ါဒ မိန့်ခွန်း -
ကျောင်းဖွင့်ပွဲတွင် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦး ဥာဏိကာဘိဝံသ ပြန်လည် ပြောကြားသော ကျေးဇူးစကား -
Labels: Video Albums
Posted by MoeMaKa at 7:41 PM No comments:
Charity and Donation Raised so far from the Burmese Community
Posted by MoeMaKa at 5:11 PM No comments:
မုဒိတာရွှေကျောင်း ကျောင်းသစ်ဖွင့်ပွဲ ဖိတ်စာ
ဘေးဧရိယာ မြန်မာမိသားစုများအားလုံးကို ဆရာတော်ဦးဉာဏိကာဘိဝံသက ဖိတ်ကြားလိုက်ပါတယ်။ ဖွင့်ပွဲအစီအစဉ်ကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Date: Sunday, July 10, 2011, Time: 9:30 AM to 1:00 PM
Location: 27695 Leidig Ct., Hayward, CA 94544
Phone: 510- 785 0787/510- 574 5442, Email: ashinlay@gmail.com
မုဒိတာရွှေကျောင်း ကျောင်းသစ်ဖွင့်ပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ခေတ္တသာသနာပြုကြွရောက်တော်မူနေကြသော ဗန်းမော်ဆရာ တော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ် မဟာနာယကဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တရာဇဓမ္မာဘိဝံသ၊ တောင်စွန်းဓမ္မ ဘေရီဆရာတော် အရှင်ဝီရိယ။ ရဝေနွယ်(အင်းမ)နှင့် ဗေးဧရိယာရှိကျောင်းအသီးသီးမှ ဆရာတော်များ ကြွရောက် ချီး မြှင့်တော်မူကြပါမည်။
(အရှင်ဉာဏိကာဘိဝံသနှင့် ကျောင်းဒကာ၊ ကျောင်းအမ အလှူရှင်များ)
ကျောင်းဖွင့်ပွဲ စားသောက်ဖွယ် အလှူရှင်များ
ဒေါ်မေကြည်မိသားစုနှင့် ဦးမောင်ကြီး ဒေါ်စန်းညွန့်မိသားစု- မုန့်ဟင်းခါး၊ ကျောက်ကြော၊ မုန့်ကျွဲသဲ
ဦးရွှေကျော် ဒေါ်ရှုအင်းမိသားစု- မြန်မာထမင်းဟင်း
ကိုအောင်သူ မဝါမိသားစု- သံဃာတော်များဆွမ်း၊ဆွမ်းဟင်း
မိခင်ကြီး ဒေါ်ဟယ်လင်လင်းအမှူးထား၍ မာဂရက်လင်း၊ ဒေစီလင်းမိသားစု-ဖာလူဒါ၊ မြန်မာမုန့်
ဦးကြည်တိုး ဒေါ်သန်းငြိမ်း(ညီမ)ဒေါ်နီမိသားစု- ရွှေရင်အေး
မိဘများအမှူးထား၍ ကိုအောင်မင်း မစန္ဒာ မိသားစု- စမူဆာ၊ အကြော်စုံ
ကျော်တေဇနှင့် မောင်နှမတစ်စု- ကော်ပြန့်သုပ်
ဦးကျော်သန်း ဒေါ်နန်းခမ်းကော်မိသားစု- ရှမ်းထမင်းချဉ်
ဦးကျော်လှိုင် ဒေါ်ငယ်မိသားစု- ဆီထမင်း၊ အာပြဲခြောက်ကြော်
ကိုကျော်လှမိသားစုနှင့် ကိုအောင်ကျော်လွင်(ထုံချိုင်း)- တို့ဟူးကြော်
ဦးကျော်လင်း ဒေါ်နန်းခမ်းရွှေ- ကျောက်ကြောဖျော်ရည်
ကိုချိုဦး မစုစုသိန်း- သံဃာတော်များအတွက် သစ်သီးစုံ
ကိုညွန့်သန်း မထွေးထွေးဝင်း သောက်ရေသန့် ဆိုဒါ
(သံဃာတော်အပါး ၂ဝ ကျော်အတွက် မိမိတို့နှစ်သက်ရာဆွမ်းဟင်းများချက်ပြုတ်၍ ကိုယ်တိုင်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်)
Posted by MoeMaKa at 11:58 AM No comments:
Posted by MoeMaKa at 11:24 PM No comments:
Posted by MoeMaKa at 4:14 PM No comments: